I-Beachfront Palm Jumeirah 1BR - I-Gorgeous Sea Views - I-Airbnb
I-Beachfront Palm Jumeirah 1BR - I-Gorgeous Sea Views
Le 1BR emangalisayo eTiara ePalm iyindawo yakho yokunethezeka eDubai!
Ukuba ngasosebeni lolwandle, nokufinyelela ku-Beach Club, ichibi, izindawo zokudlela, nebha--le ndawo iyizulu elimsulwa.
Ifulethi lifakwe izinga eliphezulu kakhulu kufakwe izinto eziphezulu ezifakiwe (izindlu zangasese zezivakashi, amalineni ekhwalithi yehhotela namathawula, i-WiFi enesivinini esikhulu, nokunye)!
Lokhu kulungele imibhangqwana, imindeni emincane, abangani, nabahambi bebhizinisi abafuna ukuhlala ntofontofo eDubai!
Sibheke ngabomvu ukukwamukela!
Ngena efulethini elihle elinefenisha nokuhlobisa okukhazimulayo. Ngokubuka kolwandle phakathi kwamafasitela amade, ungakwazi ukuphumula embhedeni kasofa ngekhebula le-TV ne-WiFi esheshayo.
Indawo yokudlela ikhanya futhi inethezekile ukuze ukwazi ukujabulela ukudla kwakho nabangane bakho.Phakamisa ukudla uma uthanda ukupheka noma wenza inkomishi yekhofi ngezinto ezisetshenziswa ekhishini (isitofu, uhhavini, izitsha zokupheka, iketela, nokunye!).
Ikamelo lokulala linombhede ongangenkosi enamalineni athokomele kanye nomatilasi ohlinzekelwe ukulala kahle ebusuku.Amathawula athambile, i-shampoo, i-conditioner, ijeli yeshawa, nezinto zokuthambisa zomzimba kunikezwa izivakashi. Iphakethe lokwamukela linikezwa lapho ufika.
Zilungiselele ukuphathwa sengathi usehhotela elingu-5* kuleli fulethi.
4.64 · 66 okushiwo abanye
I-Palm Jumeirah iyiqoqo leziqhingi ezenziwe umuntu elifana nesundu. Kuyindawo yezivakashi edume kangaka e-UAE ngenxa yezindawo zayo zokudlela ezisezingeni eliphezulu, izindawo zokungcebeleka zikanokusho, ukubukwa kogu lwase-Dubai, amakilabhu olwandle anezindawo zokungcebeleka namachibi angapheli, nokuningi.
Nakuba isesiqhingini sayo, iPalm inemigwaqo, imigudu, nezinto zokuhamba zomphakathi ezisiza izivakashi ukuba zibe nendawo yokuhlala ethokomele ngenxa yokungena kalula kuyo yonke indawo esiqhingini.
Kuningi okumelwe ukwenze ePalm Jumeirah, okuhlanganisa ukuhamba ngomkhumbi, ukugxumela kuBig Bus Dubai Tour, ukuya e-Aquaventure Waterpark kanye ne-Lost Chambers Aquarium e-Atlantis the Palm, ukuthola ibhodi lokugwedla kanye nesifundo sokuntweza emoyeni, ukutshuza emoyeni, nokutshuza emanzini. okuningi okuningi.
I-Nakheel Mall iyindawo entsha enkabeni yePalm Jumeirah edume umhlaba wonke enezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela ezinhle nezokuzijabulisa.Cishe imizuzu eyi-10 ukushayela (cishe 3.2km) ukusuka efulethini.
I-Palm Beach West manje isivulekele umphakathi jikelele futhi ihambe ibangana nje nokufinyelela ezindaweni zokudlela eziningi.
Iholide e-Palm Jumeirah liqinisekisiwe ukuthi lizoba lihle hhayi nje ngenxa yemisebenzi engenziwa kodwa ngenxa yomoya ohlanzekile kanye nemibono yodwa.
Abangane bami eFrank Porter babheke ikhaya lami ngenkathi ngingekho. Bayinkampani yokuphatha impahla Yesikhathi Esifushane eDubai.Ngiyabethemba ukuthi bazokwamukela ngemfudumalo! UFrank Porter uzokunakekela ngesikhathi uhlala futhi akusize nganoma yini oyidingayo.Banikeza ukusekelwa okungu-24/7 futhi. Uma unemibuzo, ungangabazi ukubuza!
Abangane bami eFrank Porter babheke ikhaya lami ngenkathi ngingekho. Bayinkampani yokuphatha impahla Yesikhathi Esifushane eDubai.Ngiyabethemba ukuthi bazokwamukela ngemfudumalo! U…
Izilimi: العربية, English, Français, हिन्दी, Italiano, Norsk, Polski, Русский, Svenska